Design & kubudirira - Ningbo Euro Mould & Plastic Co., Ltd
Euro Mould anozvirumbidza nezvakanakisisa matarenda ari indasitiri nokuda chakuvhuvhu pamasikiro. All edu chakuvhuvhu vagadziri akatanga chakuvhuvhu Vagadziri, achiziva zvakanaka reEuropean zvinodiwa kugadzira & kuvaka unhu anoumba.
Mumazana pamasikiro muitiro yedu mamaneja, vagadziri, mainjiniya & kugadzira nyanzvi kubatanidza kuona zvose usati kushanda kunze chokupedzisira 3D muforoma vanodhirowa.
zvakagadzirwa chikwata chedu, chirongwa mamaneja & rokutengesa kupa mangwanani kubatanidzwa kubatsira vatengi kuziva zvinogona kukundikana nokushandisa chakuvhuvhu-aibuda pachisara, etc, uye kupa dzinobvira.
Mould patani rubatsiro:
Muforoma 2D vanodhirowa
Muforoma 3D vanodhirowa
Design nokuti manufacurable
Muforoma patani Optimization
Muforoma mamiriro rutsigiro